Iindaba-Ukusukela nge-1 kaSeptemba, i-China izakuthatha uxanduva ngokudibeneyo kunye noxanduva lokufumana kwakhona amasuntswana eplastiki ahlaziyiweyo angeniswe e China
Kule minyaka mibini idlulileyo, imigaqo-nkqubo yokuhlelwa kwenkunkuma yasekhaya iphunyeziwe, kunye nokurisayikilisha inkunkuma kunye nokurisayikilisha kwakhona.
Ngomso lusuku lokunikezelwa ngokusesikweni komthetho omtsha nomdala "wenkunkuma eqinileyo". Ukusukela ngomso, ipatheni yokurisayikilishwa kweeplastiki iya kubhalwa ngokutsha. Kwixesha elizayo, ukwetyiswa kweenkunkuma e-China kuya kuba yinto eqhelekileyo!
Okwangoku, ukunqunyanyiswa kokungeniswa kwamasuntswana eplastiki asetyenziswayo kwakhona ziinkampani ezithile zokuhambisa ngenqanawa kubangele ingxoxo ebanzi kolu shishino. Eyona nto iphambili kukuba baya kuthwala uxanduva ngokudibeneyo kunye noxanduva lokufumana amasuntswana eplastiki abuye aphindiwe engeniswe e-China.
Iinkampani ezineshishini elifanelekileyo ziya kutshintsha iinkampani zazo zokuhambisa ngenqanawa. Nangona kunjalo, ngaba imeko yeenkampani eziphambili zokuhambisa iya kuchaphazela iinkampani zokuhambisa eziza kulandela? Akukaziwa.
Ukuthunyelwa kwe-COSCO emNtla Melika kubhengeze ukuba kuya kuyeka ukufumana inkunkuma eqinileyo ethunyelwe kwilizwekazi lase China ukusukela nge-1 kaSeptemba. Kuyaqondakala ukuba iimfuno zisebenza kuzo zonke izinto zenkunkuma, kubandakanya iphepha lenkunkuma, isinyithi senkunkuma, iiplastikhi zenkunkuma, amalaphu enkunkuma, amachiza amdaka njl.
Ukusukela oko kwavalwa inkunkuma, uhlengahlengiso kumgaqo-nkqubo wokungenisa kunye nemigangatho emanyeneyo yamasuntswana eplastiki asetyenziswayo abuye atsalele ingqalelo kwishishini.
Ezinye iinkcazo zenkunkuma zihambelana nokwamkelwa komda, kodwa amasuntswana nawo akavumelekanga, oku kuphakamisa umbuzo wokuthintela ukungeniswa kwamasuntswana eplastiki asetyenziswayo.
Kuba lo mthetho mtsha "wenkunkuma eqinileyo" ucacisa gca ukuba urhulumente uya kuthi ngokuthe ngcembe aqonde ukungabikho kwenkunkuma eqinileyo, andise isohlwayo senkunkuma eqinileyo engekho mthethweni, kwaye ayicacise into yokuba umntu ophetheyo kunye nomngenisi elizweni baya kuthwala uxanduva ngokudibeneyo kunye nezinye (ezinye izinto ezingekho mthethweni unokuhlawuliswa ngaphezulu kwe-500000 yuan nangaphantsi kwe-5000000 yuan), umthetho omtsha wenkunkuma oqinileyo uza kuqala ukusebenza nge-1 kaSeptemba 2020.
Ukuchaphazeleka koku, iinkampani ezihambisa ngenqanawa zixhalabile malunga okanye ziya kuba noxanduva ngokudibeneyo nangokuzimeleyo. Okwangoku, yiNkampani yokuThumela ye-COSCO kuphela evileyo ingxelo ekhutshwe ngu-COSCO Shipping. Okwangoku, iSinotrans, iYangming, ihlala iluhlaza, enye, i-CMA kunye nezinye iinkampani ezinkulu zokuhambisa izilwanyana zingenisa amasuntswana eplastiki asetyenzisiweyo, kodwa la mashishini awakhange enze zinkcazo ezifanelekileyo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba njengemveliso egqityiweyo, amasuntswana ahlaziyiweyo ayizonkunkuma eziqinileyo.
Into ezakwenzeka kwixesha elizayo kukuba xa kuzalisekiswa “umthetho wenkunkuma eqinileyo” omtsha, amasuntswana angenisa isiphelo esiphantsi aya kukhutshelwa ngaphandle ngokuthe ngcembe elizweni, kwaye amasuntswana akumgangatho ophezulu wokungenisa elizweni aya kuba ngowona mthombo uphambili.
Kodwa ngoku, ngenxa yenyani yokuba akukho mgangatho ubumbeneyo welizwe wokungenisa amasuntswana eplastiki asetyenzisiweyo, umphathi wezorhwebo lokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe usafuna ukulumka.
Oku kulandelayo yimicimbi efuna ukuqwalaselwa kumashishini angenisa elizweni egranule:
1. Kuyimfuneko ukuba ube noluvo lomngcipheko kwaye ube nokuqonda okupheleleyo kweempahla, ngakumbi ezo zinomngcipheko omkhulu wokungenisa elizweni, ezinje ngeepropathi, iinkcukacha, imibala kunye nezinto eziphambili zezinto ezisetyenzisiweyo ezirisayikilishwe;
2. Ukuba kukho amathandabuzo ngohlobo lwempahla, amasiko kufuneka aqale adibane ne-arhente yokuhlola efanelekileyo;
3. Xa amasiko aphakamisa umbuzo kwaye athumela iisampulu kwi-arhente yokuchonga ukuze ichongwe, kubalulekile ukuqaphela ukubaluleka kokusebenzisana nomsebenzi wesampulu ukufezekisa isampulu esemgangathweni nesengqiqweni;
4. Kwimeko yempikiswano yezomthetho, isohlwayo solawulo okanye ukuncitshiswa kwenqanaba lokuthenga ngetyala, kuyacetyiswa ukuba kuboniswane negqwetha kuqala kwaye lijongane nayo ngokweemeko ezithile. Ukuba kukho imfuneko, kuyafuneka ukuba kukhuselwe amalungelo asemthethweni kunye nemidla ngokuqwalaselwa kwakhona kwezolawulo kunye nokumangalelwa kwezolawulo.